FESTIVAL SOBAHYA MAHAJANGA : Niavaka ny andiany faha-14 natao tao Katsepy ny sabotsy sy alahady teo
Natao teny Katsepy ny sabotsy sy alahady teo ny festival Sobahya. Fety nisongadina indrindra ny kolotsaina sy ny vakoka. 6 août 2018
Ny loholona Bachir Soudjay izay sady mpikambana ihany koa ao amin’ny akademia malagasy no nisafidy ny sobahya izay lamba fitafin’ny mpanjaka sy taranak’andriana, lasa lamba fitondra rehefa misy fety taty aoriana ho ivon’io fety io. Misy karazany telo ireo lamba fitafy taty amin’ny faritra Marambitsy izay nisy ireo Sakalava Antalaotsy, hoy izy dia ny sobahya, ny deboany ary ny dahalany saingy ny sobahya no notsongaina.
Ny faritra no tomponandraikitra voalohany amin’ny festival sobahya ankehitriny raha ny raiamandreny Soudjay Bachir no namorona azy io ny taona 2003.... Nisy fotoana dia ireo fikambanana ara-javakanto nentin-drazana no nanao ny fangatahana sy nampandeha azy. Ankehitriny kosa, hoy hatrany Soudjay Bachir dia misy didim-pitondran’ny faritra no mametraka azy io.
Niara-dalana tamin’ny fanokafana amin’ny fomba ofisialy ny festival fitokanana ny akiba na mozea vaovao mitahiry ny vakoka sy tantara sakalava manomboka eo Sambirano ka hatrany Maintirano izay Soudjay Bachir sy ny fianakaviany no nahitana azy. Nisy ihany koa ny fitokanana ny trano fonenan’ny mpitsabo ao Katsepy izay novatsian’ny inner wheel Virton Belgique tanteraka ny fanorenana azy. Nanatrika izany ny lehiben’ny faritra boeny, Prefet an’i Mahajanga, ny sefo distrikan’i Mitsinjo, ny talem-paritry ny kolotsaina ary ny ben’ny tanànan’i Katsepy no nandray azy ireo sy ny olo-manan-kaja maro sivily sy miaramila nanatrika teny.